ထောက်ပံ့ရေးယာဉ်တန်းပါ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များကို တားဆီးခြင်းဖြစ်ဟု တပ်မတော်က ပြောကြား
နမ္မတီးမြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် တိမ်းရှောင်လာကြသူများထံ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ သွားရောက်ပို့ဆောင်မည့် ယာဉ်တန်းတွင် လိုင်စင်မဲ့ယာဉ်များ ပါဝင်လာမှုကြောင့် တားဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ယမန်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံသုံးနိုင်ငံမှ အားကစားသမားများ လိုက်ပါလာသည့် ဘတ်စ်ကား မတော်တဆမှုဖြစ်ပွား
ကွာလာလမ်ပူ၊ သြဂုတ် ၂၁
အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာအားကစားသမားများအပါအဝင် ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှ အားကစားသမားများ လိုက်ပါလာသည့် ဘတ်စ်ကားနှစ်စီးမှာ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အားကစားကွင်းသို့ အသွားတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သတင်းများက ရေးသားထားသည်။
မြစ်ဆုံရဲ့အနာဂတ်အတွက် ဒေသခံများ စိုးရိမ်ပူပန်နေကြဆဲ
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ- မတ် ၁၄ ရက်နေ့က International Day of Action for Rivers အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မြစ်ဆုံဆည် စီမံကိန်းကို ဒေသခံရွာသူ ရွာသားများက ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြစဉ်။ ဓာတ်ပုံ- Mark Inkey
Mark Inkey ရေးသားသည်။
တိုင်းရင်းသားများကို နံပါတ်တစ် ဦးစားပေး ကာကွယ်မည်ဟု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား
တပ်မတော်အနေဖြင့် တိုင်းရင်းသားများကို နံပါတ်တစ်ဦးစားပေး ကာကွယ်သွားမည်ဟု တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့ပြောကြားသည်။
ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်ချေးငွေအဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ပေးအပ်
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၈ စီးပွားရေးတည်ငြိမ်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်ချေးငွေ (Development Policy Operation) အဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ အား ကမ္ဘာဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုချေးငွေသည် နိုင်ငံတော်၏ ဘတ်ဂျက်သို့ တိုက်ရိုက် ပံ့ပိုးထည့်ဝင်သည့် ချေးငွေအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး.
မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမည့် ဝက်ဘ်ဆိုက် မိတ်ဆက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော အခမဲ့အွန်လိုင်း လက်ဖွဲ့ဝန်ဆောင်မှု ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သည့် MingalarLetPhwet.com ကို သြဂုတ် ၁၇ ရက်နေ့က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဝက်ဘ်ဆိုက်က မြန်မာနိုင်ငံရှိ မင်္ဂလာပွဲတိုင်းတွင် ကြုံတွေရမြဲဖြစ်သော အမျိုးအစားတူ လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းများ လက်ခံရရှိခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဟုဆိုသည်။ “ဧည့်သည့်တွေအနေနဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံတွေ ဘာလိုချင်လဲ မသိတဲ့အခါ သူတို့လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ သြစတြေးလျ ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှစ်ခု ပူးပေါင်း
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၈ ရန်ကုန်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် သြစတြေးလျကုန်သည်ကြီးများ အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကုန်သည်ကြီးများ အဖွဲ့သစ်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းသွားမည်ဟု ၎င်းတို့က သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ သြစတြေးလျနှင့် မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားတွင် စီးပွားရေးချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ကြီးထွားလာရန် လုပ်ဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များက အဆိုပါအဖွဲ့သစ်တွင် ကိုယ်စားပြု ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်မည်ဟု ဆိုသည်။.